Afuna uCele kuleli awakhohlwe okwamanje, ubhekelwa phesheya
Ukudlala kahle kukaThabo Cele eqenjini aluleli lika-Under 23 sekumenze undabamlonyeni futhi abalandeli banxenxa amaqembu abo ukuba aphuthume amsayine. Lokhu kungenxa yokuthi uCele akanaqembu njengamanje kulandela ukuhlukana neCivo Piedade yasePoturgal ekupheleni kukaJuni.
Abalandeli beKaizer Chiefs, Mamelodi Sundowns ne-Orlando Pirates sebekuvezile ukufisa kwabo ukuthi bangakujabulela ukubona lo mdlali kuwo. Kodwa Impempe seyithole ukuthi akulula ukuba kwenzeke lokhu.
Umthombo osondelene nalo mdlali uthe ukubuya kuleli kungaba yinto yokugcina engenziwa yilo mdlali kwazise kusabhekwe aqhubeke azakhele igama phesheya.
“Akukho ukukhathazeka ngekusasa lakhe ngoba lokhu akwenza kuma-Olympics kuwukufakazela kwabekwenza isizini yonke eqenjini lakhe. Angimboni ebuya kuleli okwamanje ngoba kunamaqembu akumaligi amakhulu akhulunyelwa nawo kumanje.
“Kuneqembu eliseFrance eselike lakuveza ukumhalela kwalo. Kukhona naseBelgium engike ngezwa ngalo kanti nakhona ePortugal akhona amfunayo. Sekulindwe aqede kuma-Olympics bese kubhekwa ke ukuthi angaya kuphi,” kusho lo mthombo.
FUNDA NALA: UNcobo uyayincoma iPSL ngendlela ephathe ngayo udaba lwecala leRoyal AM
UCele uphuma kwiKZN Academy kanti wahamba kuleli ngemuva kokwenza kahle emqhudelwaneni wentsha owawungo-2018. Wasayina eqenjini lesibili leBenfica ePortugal.
Impempe ithole ukuthi emaqenjini akuleli aseke abuza ngalo mdlali kuseyiSwallows FC kuphela kodwa nayo isamisiwe kancane.
Previous Previous post: UBrooks usebheke ukubethela indawo yakhe kwiBafana enkulu
Next Next post: UDolly usefaniswe eduze nala kuhleli khona abadlali abasha beChiefs